Arduino Boards တွေမှာ ဘာတွေပါသလဲ? | Easydevboards
Home / Arduino / Basic Arduino / Arduino Boards တွေမှာ ဘာတွေပါသလဲ?
Arduino Boards အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့် ပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ် Board ကို သုံးမလဲရွေးခြယ်ရမှာပါ။ Board တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ပုံစံကွာပေမယ့် သူတို့တွေမှာ ပါတဲ့ အဓိက Components တွေကတော့ အတူတူပါပဲ။
Arduino Board တိုင်းမှာ Power Supply အတွက် Barrel Jack တစ်ခုပါတယ်။ USB ကနေ 5V Power Supply လဲပေးနိုင်ပါတယ်။ Arduino UNO မှာ တော့ USB ကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Berrel Jack ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Power Supply ပေးတယ်။ အထက်က ပုံမှာ (1) က USB Connector ဖြစ်ပြီးတော့ (2) ကတော့ Barrel Jack ပါ။ USB ကြိုးကို Power Supply ပေးရုံသက်သက်မဟုတ်ပဲ Computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Firmware Download လုပ်ဖို့၊ Firmware Debug လုပ်ဖို့အတွက်ပါသုံးတယ်။ USB ကိုသုံးပြီး Firmware ဘယ်လို Download လုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ Installing and Programming Tutorial မှာ ကြည့်နိုင်တယ်။
သတိထားရမှာကတော့ Barrel Jack ကနေ Power ပေးမယ်ဆိုရင် Voltage က 12V ထက်မကျော်ရပါဘူး။ ကျော်ရင် Arduino Board ကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ 6V~12V အတွင်း Power Supply ပေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Arduino မှာ အခြား အရာတွေနဲ့ တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ PIN တွေပါရှိတယ်။ အဲ့ဒိ PIN တွေကို အလွယ်တကူ Wire နဲ့ ချိတ်ဆက်ဖို့ အနက်ရောင် ပလပ်စတစ် Header တစ်ခု လုပ်ပေးထားပါတယ်။ PIN တစ်ခုခြင်းစီ အကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်သားလေ့လာနိုင်ပါတယ်။
GND (3): Circuit တစ်ခုလုံးရဲ့ GND ပါ။
5V (4) & 3.3V (5): Arduino မှာ အခြား ချိတ်ဆက်လာမယ့် Circuit တွေကို Power ပေးဖို့ 5V နဲ့ 3.3V PIN နှစ်ခုကို ထုတ်ပေးထားပါသေးတယ်။
Analog (6): “Analog” လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ PIN တွေကတော့ Analog Signal တွေကို တိုင်းတာတဲ့ အခါမှာ သုံးတယ်။ ဥပမာ၊ အပူချိန်တိုင်း ကိရိယာ (Temperature Sensor) တွေက အပူချိန်ကို တိုင်းတဲ့အခါ၊ AC Signal တွေ တိုင်းတာတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ သုံးပါတယ်။ Arduino UNO မှာ တော့ A0 ~ A5 ဆိုပြီး ပါတယ်။ Arduino Board က ဝင်လာတဲ့ Analog Signal ကို Digitization (Digital တန်ဖိုးပြောင်းခြင်း) လုပ်ပြီး ရလာတဲ့ တန်ဖိုးကို ဖတ်ယူတာပါ။ အသေးစိတ်ကို Temperature Sensor Project ရောက်ရင် ထပ်ပြောပါတယ်။
Digital (7): Arduino Board တွေမှာ Vcc နဲ့ GND Pin ကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ PIN တွေကို Digital PIN အနေနဲ့ သုံးချင်ရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ Digital PIN တွေက0နဲ့ 1 ပဲ သိတာပါ။ Digital PIN မှာ INPUT နဲ့ OUTPUT PIN ဆိုပြီး ၂ မျိုး ခွဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ၊ Button နှိပ်လိုက်တဲ့ အခြေအနေကို သိချင်ရင် INPUT အနေနဲ့ Digital PIN ကို သုံးပါမယ်။ LED မီးလင်းဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ OUTPUT အနေနဲ့ သုံးမှာပေါ့။
PWM (8): Arduino UNO Boards ရဲ့ PIN 3,5,6,9,10,11 တွေရဲ့ဘေးမှာ (~) တွေ့မိမှာပါ။ အဲဒိ PIN တွေကို Digital PIN အနေနဲ့ သုံးနိုင်သလို PWM (PULSE WIDTH MODULATION) အလုပ်လုပ်တဲ့ PIN အနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်။ PWM ကို Motor Drive Control System မှာလည်းသုံးလို LED မီးသီး လင်းနေရာကနေ မှိန်သွားတဲ့ Circuit တွေမှာလည်းသုံးပါတယ်။ Motor Drive Control Circuit Project မှာ PWM အကြောင်း ထပ်ပြောပါမယ်။
AREF (9): Analog Reference PIN ပါ။ များသောအားဖြင့် ဒီ PIN ကို မသုံးပါဘူး။ External Reference Signal အနေနဲ့ သုံးချင်တဲ့ အခါမှ သာ သုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ PIN က INPUT PIN အနေနဲ့ပဲ သုံးနိုင်ပါတယ်။
(10) က Reset Button ပါ။ Reset Button ကို နှိပ်ပြီး Arduino Board Firmware ကို အစက ပြန် Run အောင် လုပ်ပါတယ်။ Firmware Run နေတဲ့ အချိန်မှာ Error တက်တဲ့ အခါ၊ Hang တဲ့ အခါတွေမှာ Reset Button ကို နှိပ်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါက Temporary အဖြေပါ။ ပြဿနာကို တော့ ပြေလည်သွားစေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
(11)တော့ LED ပါ။ Power Source တပ်လိုက်တိုင်း RED အနီရောင်လင်းရပါမယ်။ မလင်းဘူးဆိုရင်တော့ Circuit တခုခုမှားနေပြီးပေါ့။
TX က transmit ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးတော့ RX ကတော့ receive ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ Serial Communication သုံးပြီး Data Communication လုပ်နေတဲ့ အခါတိုင်းမှာ LEDs (12) က မီးလင်းနေရပါမယ်။ Firmware Download လုပ်တဲ့ အခါမှာလည်း LEDs (12) က မီးလင်းပါတယ်။
သတ္တုရောင် ခြေထောက်တွေတဲ့ အနက်ရောင်လေးထောင့် တုံးကတော့ MAIN IC (Integrated Circuit) (13) ပါ။ Arduino ရဲ့ ဦးနှောက်လို့ပြောရမှာပါပဲ။ MAIN IC ကို ATMEL Company က ထုတ်လုပ်ပြီး ATmega IC အမျိုးအစားကို ပဲသုံးပါတယ်။ Arduino Boards အမျိုးမျိုး ရှိလေတော့ ATmega နံပါတ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ IC တွေကို သုံးထားတာပါ။ ATmega IC ရဲ့ Datasheet ကို ဖတ်ပြီး ဘယ် IC က ဘယ်လောက်စွမ်းတယ်ဆိုတာ သိနိုင်မှာပါ။
The voltage regulator (14) Arduino Board မှာပါ ပါတယ်။ Voltage Regulator က ဝင်လာတဲ့ 5V ကို 3.3V ပြောင်းပေးတဲ့ အလုပ်ပဲလုပ်တာပါ။ Voltage regulator ရဲ့ ခံနိုင်ရည် အရှိဆုံး Voltage က 20V ပါ။ ဒါကြောင့် Input Voltage 20V ထက်ကျော်ရင် Regulator ပျက်ဆီးနိုင်ပါတယ်။
Arduino က စွမ်းဆောင်ရည် ပေါ်မူတည်ပြီး Boards တွေ အမျိုးမျိုး ထုတ်ပါတယ်။ Arduino Board က Open Source Hardware ပါ။ ဒါကြောင့် မိမိကြိုက်သလို ပြောင်းနိုင်၊ ပြင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဘယ် Arduino Boards ကို သုံးရမှန်းမသိရင် Arduino Selection Guide မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Arduino Uno ကတော့ လူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ အသုံး အများဆုံးပါပဲ။ ပထမဆုံး စပြီး စမ်းသပ်ချင်သူတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ Digital Input/Output PIN 14 ခုပါရှိပြီး အဲဒိထဲက ၆ ခုကို PWM အနေနဲ့ သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ Analog Input Pin ၆ ခုကလည်း ပုံမှန် Project တွေအတွက်တော့ အနေတော်ပါ။ USB နဲ့ Power Supply ပေးနိုုင်သလို Firmware ကို လည်း USB ကနေတဆင့် Download လုပ်နိုင်တဲ့ အတွက် Programmer သပ်သပ်ထပ်ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။ 5V နဲ့ အလုပ်လုပ်တာမို့9V Battery လေးသုံးပြီးတောင် Power ON နိုင်ပါသေးတယ်။
Arduino Mega ကတော့ Arduino UNO ရဲ့ အစ်ကိုကြီးလို့ပြောရမှာပါ။ Digital Input/Output ၅၄ ခုတောင်ပါပြီးတော့ အဲဒိထဲက ၁၄ ခုကို PWM Output တွေအနေနဲ့ သုံးနိုင်တယ်။ Analog Input ၁၆ ခုလည်းပါသေးတယ်။ UNO လိုပဲ USB နဲ့ Power Supply ပေး၊ USB ကနေပဲ Firmware Download လုပ်နိုင်သေးတယ်လေ။ Digital/Analog PIN တွေအများကြီးပါတော့ Project အကြီးကြီးလုပ်နိုင်တာပေါ့။
Arduino Leonardo မှာ သုံးထားတဲ့ Atmel Chip က Built-in USB ပါတယ်လေ။ UNO နဲ့ MEGA မှာက မပါတော့ USB Connection ရဖို့ Chip အပိုတစ်ခုသုံးရတာပေါ့။ Leonardo က Built-In ဆိုတော့ Chip အပို သုံးစရာမလိုဘူး။ ဒီတော့ Manufacturing မှာ Chip တစ်ခု သက်သာသလို ခဲဆော်ရတာလဲ သက်သာတော့ ပိုက်ဆံကုန်သက်သာတာပေါ့။
Arduino Board တစ်ခုထဲနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေမယ့် ပြီးပြည့်စုတယ်တော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားအောင် တစ်ခုခုနဲ့ ချိတ်ဆက်ရမှာပါ။ Project လေးပို အသက်ဝင်လာအောင် Sensor လေးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်၊ Arduino Shields တွေ ထည့်ပေါင်းလိုက်ရင် အင်မတန်မှ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Product တစ်ခုထွက်လာတော့မှာပါ။
Sensor အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Light Sensor, Temperature Sensor, Pressure Sensor, Proximity Sensor, Acceleration Sensor, Carbon monoxide Sensor, Radioactivity Sensor, Humidity Sensor, Barometric Pressure Sensor. လုပ်ချင်တဲ့ Sensor သာပြော စျေးကွက်မှာ ရှာဝယ်ပြီး Arduino လေးနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Arduino Shield ဆိုတာ ကြိုတင်လုပ်ထားတဲ့ Circuit လေးတစ်ခုပါပဲ။ Motor Control လုပ်ချင်ရင် Arduino ကနေ Motor Drive Shield ကတဆင့် Motor ကိုု ခိုင်းနိုုင်တယ်။ Internet နဲ့ ချိတ်ချင်ရင် Ethernet Shield၊ Cellular နဲ့ ချိတ်ချင်ရင် GSM Shield၊ WIFI နဲ့ ချိတ်ချင်ရင် Wifi Shield စသဖြင့် စျေးကွက်မှာ ရှိနှင့်ပြီးသား Shield တွေနဲ့ မိမိ Product ရဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုုချဲ့ ထွင်နိုင်သေးတယ်။
Arduino အကြောင်းကို အခြေခံအားဖြင့် နားလည်ပြီးဆိုတော့ Arduino Project လေးတွေကို ဒီနေ့ပဲ စလိုက်ကြစို့။